I-Semrush Yengeza Ithuluzi Lokukhasa Isayithi Lakho Futhi Thola Izinkinga Ze-HTTPS | Martech Zone
ISemrush Ingeza Ithuluzi Lokukhasa Isiza Sakho futhi Uthole Izinkinga Ze-HTTPS
ULwesithathu, April 26, 2017 ULwesine, April 27, 2017 Douglas Karr
Uma ngabe wake wasebenzisa amathuluzi wonjiniyela wesiphequluli ukuzama ukulandelela isithombe esinamandla noma ukufaka okungaphephile, uyazi ukuthi kukhathaza kanjani. Nginenhlanhla ngathi, kube nokuvuselelwa okuhle kakhulu Semrushokuphelele Ukuhlolwa Kwamasayithi - ukwengezwa kwe- Isihloli se-HTTPS.
Manje usungahlola ngokujulile i-HTTPS ehlanganisa amaphesenti ayi-100 ezincomo zokuphepha ze-Google.
Kungani i-HTTPS ibaluleke kangaka?
Ukusuka ku-HTTP uye ku-HTTPS akuyona nje into enhle ukuba nayo, kuhle kakhulu kufanele. I-HTTPS isetshenziselwa ukuvikela ubumfihlo nobuqotho bemininingwane eshintshwe phakathi kwesiphequluli sakho newebhusayithi: amakhukhi, ukungena ngemvume namaphasiwedi, imininingwane yekhadi lasebhange, njll. Izivakashi zakho zizokuthanda kakhulu uma une-HTTPS, ngoba zizozizwa ziphephe kakhulu ukungena kwazo idatha kuwebhusayithi yakho.
Kungani Ukuhlolwa kwe-HTTPS
Inqubo yokufuduka isuka ku-HTTP iye ku-HTTPS uhambo olunzima kakhulu, futhi ngaphandle kokuthi usebenzise i-HTTPS kahle, yonke imizamo yakho yokuba unkulunkulu wezokuphepha izomoshakala. Amaphutha ajwayelekile afaka phakathi izinto ezifana:
Izitifiketi eziphelelwe yisikhathi
Izitifiketi ezibhaliswe egameni lewebhusayithi elingalungile
Ukusekelwa kwegama lenkomba yeseva elilahlekile (SNI)
Izinhlobo ezindala zeprotocol
Izakhi zokuphepha ezihlanganisiwe.
Ngokungafani namanye amasheke wokuqalisa we-HTTPS akhona, Semrush ikutshela ngqo ukuthi wenze liphi futhi hlobo luni lwephutha nokuthi ungalilungisa kanjani. I-Site Audit HTTPS Checker ine-interface esebenziseka kalula ngawo wonke amasheke akhonjiswe ngendlela esobala. Okuhle kunakho konke, amasheke akhiwe ngokususelwa ku- Izincomo zokuqalisa ze-Google ze-HTTPS.
Ukudalulwa: Singabanxusa be- Semrush
Tags: iphutha lesipheqululihttpsIsihloli se-httpsUkukhasa kwe-httpsIphutha le-httpsokuqukethwe okuxubileamakhasi angavikelekileamakhasisemrushukuhlolwa kwamasayithi
Kungani Amathuluzi Wokubambisana Okubalulekile Ayisidingo Eqenjini Lakho Ukuze Uchume
Yimuphi Abathengisi Abangafunda KuDell's IT Transformation Research?